Hiroshima University International Student Association - ひろしま留学大使｜HIROSHIMA Study Abroad Ambassador
Hiroshima University International Student Association
Do you worry about whether your study life in Japan will be boring and lonely? After reading this post, you will know it that you don’t need to worry about it at all.
Various kinds of associations and International student support center are already right here for you.
In Hiroshima University, we have HUISA -Hiroshima University International Student Association. HUISA arranged many events occasionally; hiking, winter bus tour, Mazda visit, Sakura Hanami and so on. You can get this kind of information through your student information system (Momiji student account). All events are free and need to register in advance.
Bonus information: There will beabig festival called "Yukata Matsuri" at Hiroshima University on July 9, 2017.
So, right now HUISA is inviting international students to join general preparation meeting for Yukata Festival. The meeting will be on this Thursday (1st June 2017), during 6:15 pm to 7:00 pm, at Student Plaza 1F, Higashihiroshima Campus. So, if you are at Higashihiroshima Campus, please come and join HUISA General meeting.
Here is the official Facebook page of HUISA. https://www.facebook.com/pg/hiroshimaunivISA/
Facebook group of HUISA: https://www.facebook.com/groups/727021394085641/
ဂျပန်မှာကျောင်းလာတက်လို့ တစ်ယောက်ထဲဖြစ်နေမလား၊ သူငယ်ချင်းအသစ်တွေနဲ့ အဆင်ပြေပါ့မလားလို့ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။
တက္ကသိုလ်တွေမှာ ကျောင်းသားတွေကို ပံ့ပိုးပေးမယ့် အသင်းအဖွဲ့တွေက ဆင်သင့်ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဟီရိုရှီးမားတက္ကသိုလ်မှာတော့ Hiroshima University International Student Association ဆိုပြီးရှိပါတယ်။
အဲဒီကျောင်းသားအသင်းကနေ တောင်တက်တာ၊ နှင်းလျောစီးသွားတာ၊ မာဇဒါကားပြခန်းကို သွားလေ့လာတာ၊ဆာကူရာပန်းကြည့်ပွဲသွားတာ၊ ယုကတ (ဂျပန်ရိုးရာ ၀တ်စားဆင်ယင်)ပွဲ စသဖြင့် ရာသီအလိုက်စီစဉ်ပေး လျက်ရှိပါတယ်။ အဲဒီအစီအစဉ်တွေကို ကျောင်းသားတွေရဲ့ မိုမီဂျီအကောင့်လို့ ခေါ်တဲ့ သီးသန့်ကိုယ်ပိုင် သတင်းအကောင့်တွေမှာ ၀င်ကြည့်ပြီး လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ အစီအစဉ်တွေ အားလုံးက အခမဲ့ပါ။ ကြိုတင်လျှောက်ထားဖို့ပဲ လိုအပ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်အစီအစဉ်အနေနဲ့
ယခုလာမည့် ဂျူလိုင် ၉ ရက်နေ့မှာလည်း ဟီရိုရှီးမားတက္ကသိုလ်ရဲ့ ယုကတပွဲမှာ ပါဝင်နိုင်ဖို့ စီစဉ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ဒီမှာရှိနေသောမြန်မာများပါဝင်နိုင်ဖို့လည်း ဒီကနေ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေ။